गायक निशान भट्टराईले गरे विहे ! « MNTVONLINE.COM
युवापुस्ताका चर्चित गायक निशान भट्टराईले विवाह गरेका छन् । नेपाल आइडलको पहिलो सिजनमा फस्ट रनरअप गायक भट्टराईले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा मंगलवार निशानले प्रेमिका ऋचा न्यौपानेसँग जिल्ला अदालत काभ्रेमा कानूनी विवाह गरेका हुन् ।
दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका निशान र ऋचाको नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष एवं सर्वौच्च अदालतका अधिवक्ता रमेश हुमागाईंको रहोवरमा दर्ता विवाह भएको हो । ऋचा मोडल हुन् । पछिल्लो समय के माया लाग्छ र गीतको टिकटिक भिडियोमा निशान र ऋचा सँगै देखिएका थिए । ऋचाले ‘लाहुर जाने रेल’ बोलको गीतमा निशानसँग अभिनय गरेकी थिइन् ।
युट्युब टेन्ड्रिङमा टेक बिसीको ‘झम्क्या बुलाकी’
सिनेमाघर सञ्चालनमा आउँदै, ५० प्रतिशत मात्र दर्शक राख्न पाइने !
चर्चित गाइका मेलिना राई र गायक विरेन्द्र विष्टको स्वरमा ‘जाले रुमाल’ गीत सार्वजनिक !
आशिसको ‘एक्लो यो रात’ सार्वजनिक !
बलिउड निर्माता अनुरागविरुद्र्ध बलात्कारको आरोप !